IDell EMC World: Imigomo eyi-10 Yokuguqula Ulwazi Lwezobuchwepheshe | Martech Zone
IDell EMC World: Imigomo eyi-10 eguqula ubuchwepheshe bezokwazisa
UMsombuluko, May 22, 2017 NgoLwesihlanu, Novemba 17, 2017 Douglas Karr
Hawu, amaviki ambalwa kanjani! Uma uqaphele ukuthi angikaze ngibhale kaningi, kungenxa yokuthi ngithathe uhambo olulodwa ngaya kulo UDell EMC Umhlaba lapho mina noMark Schaefer saba nelungelo lokuxoxisana nabaholi kuzo zonke izinkampani zeDell Technology zabo Izinkanyiso podcast. Ukubeka le ngqungquthela kahle, ngihambe amakhilomitha angu-4.8 ngosuku lokuqala ngalinganisela ngamamayela ama-3 nsuku zonke ngemuva… futhi lokho bekungokuphumula njalo nokuthola amakhona ukuze kwenziwe umsebenzi othile. Bengingahamba ibanga lelo kabili kepha ngiphuthelwe okuqukethwe okuhle nezethulo.
Ngenkathi ingqungquthela ibigxile kwezobuchwepheshe, kubalulekile ukuthi ochwepheshe bezokumaketha babone ukuthi yini eza ngasesikhathini sobuchwepheshe bolwazi. Izinkampani sezivele zithembele kubuchwepheshe cishe kuzo zonke izici zebhizinisi labo - futhi ikusasa liletha namandla okuguqula zonke ezinye izici.
Ngaphambi kokubheka amanye amatemu athile, kubalulekile ukuqonda ukuthi yini IT Transformation ichazwa njenge nokuthi izinkampani zingazihlola kanjani ezazo uguquko maturity.
Ukuguqula i-IT yakho kuqala ngokulungisa indlela yenhlangano yakho kwingqalasizinda. KUFANELE kucatshangwe njengamandla okuqhuba ukufeza izinhloso zebhizinisi, hhayi ukunakekelwa nokugcina amalambu ekhanya. Isikhungo sedatha sanamuhla senzelwe ukusheshisa imiphumela.
Ngamanye amagama, sonke siba ubuchwepheshe izinkampani. Futhi lezo zinkampani ezenza amapulatifomu azo abe ezesimanje, ziqasha abasebenzi abafanele, futhi ziqinisekise ukuphepha ziyisisekelo zibona ukonga okwehlukile okuvula izabelomali ezethula imikhiqizo nezinsizakalo zazo. Nayi eminye yemigomo okufanele uqale ukuyiqonda futhi ucabange ukuthi bazoyishintsha kanjani inkampani yakho nokulindelwe kwamakhasimende akho kungekudala.
Kuhlangana - Ingqalasizinda ehlanganisiwe (i-CI) ihlanganisa ndawonye izici eziyinhloko zesikhungo sedatha - ikhompiyutha, isitoreji, ukuxhumana nokuxhumana okuhle. Akusekho ukucushwa komuntu ngamunye, ipulatifomu ebekwe kalula ngemiphumela yokusebenza elindelekile.
Ukuhlangana okukhulu - iqinisa ngokuqinile lezi zici ezine, inciphise isidingo sobuchwepheshe nokuhlanganiswa futhi inciphise kakhulu ubungozi bamaphutha noma isikhathi sokuphumula.
I-Virtualization - Ngenkathi amasistimu we-virtualized abekhona amashumi amabili eminyaka, amandla okwenza ubuhle kuzo zonke izinhlelo asevele elapha. Izinkampani sezivele zithuthuka ezindaweni eziseduze noma ezihleliwe ezihanjiswa ekukhiqizeni lapho zidingeka. Isoftware yokwenza kahle izodinga ukumiswa okuncane futhi okumbalwa futhi ihlakaniphe ngokwengeziwe njengoba ibheka futhi isabela kuzimfuno.
Imemori Eqhubekayo - ikhompyutha yanamuhla incike kokugcina kanzima kanye nakwimemori, ngamakhompiyutha ahambisa idatha emuva naphambili. Imemori eqhubekayo iguqula ikhompyutha ngokugcina isitoreji kwimemori lapho ingabalwa khona. Amasistimu wokusebenza kweseva azothuthukiswa aqaphele ngokuphindwe kabili kuya kishumi isivinini samaseva ayizolo.
Cloud Computing - Sivame ukubheka ifu njengokuthile okuqondene nesoftware yethu, isitoreji sethu, noma amasistimu wethu wesipele atholakala kuzikhungo zedatha. Kodwa-ke, i- ifu lekusasa lingaba ngobuhlakani futhi lifake ngaphakathi endlini, ngaphandle-okufushane, noma amafu womkhiqizo yonke indawo.
Ukuhlakanipha okungekhona okwangempela - ngenkathi abathengisi beqonda i-AI njengamandla esoftware yokwenza ukucabanga futhi ikhiqize isoftware yayo. Yize lokho kuzwakala kusabisa, kuyajabulisa ngempela. I-AI izohlinzeka ithuba lezingqalasizinda ze-IT ukukala, ukunciphisa izindleko, nokulungisa izingqinamba ngaphandle kokungenelela.
Ukucutshungulwa kolimi ngokwemvelo - izinkampani ezinjenge-Amazon, i-Google, iMicrosoft, ne-Siri zithuthukisa i-NLP kanye namandla ezinhlelo zokuphendula nokuphendula kumiyalo elula. Kepha ngokuqhubekela phambili, lezi zinhlelo zizoguqula futhi ziphendule ngokukhalipha (noma mhlawumbe okungcono kakhulu) kunokwenziwa ngabantu.
I-Utility Computing - uma uxhuma esitolo, awucabangi ngokufunwa, igridi, amandla, noma izipele ezidingekayo ukuqinisekisa amandla kudivayisi yakho. Lokhu kungukuqondisa kwamadivayisi wethu weselula, ama-laptops ethu, nengqalasizinda yethu yeseva. Ngezindlela eziningi, sesivele sikhona kepha kuya ngokuya kube ngokoqobo.
Iqiniso elixubile - amandla wekhompiyutha esixoxa ngawo lapha aqhubeka nokukala ngaphezu kwanoma yini esake sayicabanga, okusenza sikwazi ukunamathisela umhlaba owengezelelwe kulokho okwangempela. Ngeke kube kude kakhulu manje ngaphambi kokuba sihlanganyele nomhlaba wethu ngale kwe-iPhone noma i-Google Glasses, futhi sibe nokufaka okungashumeki okuhlanganisa umhlaba wethu wangempela nolwazi esilutholayo ukuthuthukisa yonke impilo.
Inthanethi Things - ngezindleko zokwehla, ukwehla kwehardware, ukunwetshwa komkhawulokudonsa, nokusebenzisa ikhompuyutha kube wusizo, i-IoT ikhula ngokungaguquki. Ngenkathi sikhuluma nochwepheshe kwaDell Technologies, safunda ngemizamo ye-IoT kwezokunakekelwa kwezempilo, ezolimo, nangazo zonke ezinye izici zokuphila kwethu.
Isibonelo esisodwa esachazwa ukusetshenziswa kwe-IoT nezolimo lapho izinkomo zokukhiqiza ubisi zafakwa khona ngamadivayisi aqapha ukudla nokudla kwawo ukuze kuthuthukiswe ukujiya okudingekayo ekukhiqizeni ushizi. Leli yizinga lamasu amasha nokusebenza kahle esixoxa ngakho nobuchwepheshe. Hewu!
Akukona nje obunye balobu buchwepheshe obusiqhubela phambili, kunjalo inhlanganisela yakho konke Ngokuya ngokushesha emakethe. Sibona ukushesha kwezobuchwepheshe esingakaze sikubone selokhu kwethulwa i-Intanethi ne-eCommerce. Futhi, njengalezo zinguquko, sizobheka njengoba izinkampani eziningi zithatha isabelo semakethe ngokutholwa ngenkathi abanye abaningi besala ngemuva. Amakhasimende azokwamukela, avumelane nezimo, futhi alindele ukuthi inkampani yakho itshalwe imali ngokuphelele kubuchwepheshe ukusiza isipiliyoni sabo ngomkhiqizo wakho.
Yonke inkampani izoba yinkampani yezobuchwepheshe.
Ukudalulwa: Ngakhokhelwa nguDell ukuba ngiye eDell EMC World futhi ngisebenze kuma-podcasts eLuminaries. Kodwa-ke, azange basize ukubhala lokhu okuthunyelwe ngakho-ke kungasho ukuthi izincazelo zami zicishiwe kancane. Ngiyabuthanda ubuchwepheshe, kepha akusho ukuthi ngisho ngiziqonda kahle zonke izici zabo!
Tags: aiukuhlakanipha okungekhona okwangempelaezishintshayongamafuukuvumelanaDelldell emcdell emc umhlabaama-genomicsukuzithobaIotiqiniso elixubileukucutshungulwa kwezilimi zemveloNlpukuphikelelaIngucukoukusebenzisa ikhompyuthaI-virtualizationVMware
Izinzuzo ezi-5 zokumaketha kwe-Agile Kunezinqubo Zokukhangisa Zendabuko
Izinto Ezi-4 Abakhangisi Abangafunda KuDatha Yosuku Lomama Ukuthuthukisa Imikhankaso Yosuku Lobaba